Ahoana ny fomba hisorohana ny fametrahana automatique ny hitsin-dàlan'ny rindranasa alaina ao amin'ny Google Play Store | Androidsis
Ahoana ny fomba fisorohana ny rindranasa alaina ao amin'ny Play Store tsy hametaka hitsin-dàlana amin'ny birao Android
Androany te-hiverina miaraka amin'ity fampianarana fototra ho an'ny Android na fampianarana ho an'ireo mpampiasa vao manomboka amin'ny rafitra fiasa Android. Ny antony dia tsy iza fa ny andiam-panontaniana tonga tamin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy Androidsis, izay anontanian'ny mpampiasa anay raha misy fomba manakana ny fametrahana automatique ny hitsin-dàlan'ny rindranasa alaina ao amin'ny Google Play Store, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android.
Ny valiny, mazava ho azy, dia ENY, na dia mety hafenina na sarotra hita aza io safidy io, indrindra ho an'ireo mpampiasa vaovao amin'ny Android. Ka raha te hahalala ianao ny fomba hialana amin'ny fametrahana automatique ny hitsin-dàlan'ny rindranasa alaina ao amin'ny Play Store, Manoro hevitra anao aho hamaky hatrany ity lahatsoratra ity.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fametrahana automatique ny hitsin-dàlana amin'ny rindranasa rehetra alaina ao amin'ny Google Play Store
Sakano ny fametrahana ny hitsin-dalana ho azy ho an'ny rindranasa alaina ao amin'ny Google Play StoreTsotra toy ny miditra amin'ny sehatry ny Play Store sy ny tsy fanamarinana boaty iray izay voamarina tsy misy fampiasa ao amin'ilay fampiharana. Mba tsy hisalasalana, ao amin'ilay horonan-tsary apetrako eo ambonin'ireto andalana ireto ihany, no hazavaiko tsikelikely ary amin'ny antsipiriany be loatra ka na ny mpampiasa Android fototra indrindra aza dia mahatakatra tsara izany.
Ato amin'ity sary misy sary ity dia avelako ho anao ny pikantsary amin'ny zavatra rehetra hazavaiko amin'ny fomba fohy kokoa ao amin'ny Tutorial video an'ny Android fototra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba fisorohana ny rindranasa alaina ao amin'ny Play Store tsy hametaka hitsin-dàlana amin'ny birao Android
Efa manana ny ohatra voalohany amin'ny sary nalaina tamin'ny Mi Note izahay